ဒီတပတ်ပိတ်ရက်တော့ ဘာမှပြီးဆုံးအောင် မရေးဖြစ်ဘူး။ သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃ မှာ ဖော်ပြဖူးခဲ့တဲ့ ကဗျာဟောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
တဖက်လူက ပြန်ရိုက်မရအောင် ပြန်ပို့တယ်
ကြည့်ကောင်းနေတုန်း သတ်မှတ်ချိန် မိနစ် ၉၀ ပြည့်သွားတဲ့ ဘောလုံးပွဲလိုပဲ.. ^-^
အဲဒီလို စေတနာမျိုး ရှိဖို့ပဲ လိုတာပါ ညီမရယ်။
မရောက်တာကြာသွားတဲ့ အမအိမ်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှိမ့် ပြီးလာခဲ့တယ်။ :D
မပန်ရေ...အဲဒီကဗျာလေးကို သံလွင်မှာ ဖတ်ဖူးကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တာ....ဘဝကို လှလှပပလေး ထင်ဟပ်စေတဲ့ ၊ လှိမ့်ချပေးတတ်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေလည်း ဘဝထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို လှစ်ကနဲ ပြလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး...
ကဗျာလေးကိုကြိုက်တယ်..။ လင့်ချိတ်ထားပါတယ်နော်။ ခွင့်ပြုပါလို့....
တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့တင် ငါ့ကိုယ်ငါ့ အကောင်းဆုံးလှိမ့်ချပေးခဲ့ပါတယ်..
လာမထိခင်ကတည်းက ငါကလှိမ့်ချခံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီးသား...
အဆုံးအစ ရှာမရတဲ့ ဘဝမှာပေါ့..
ီ ဘယ် ဆီ ကို မင်း ရောက် နေ လဲ၊ဘာ တွေ ကို မင်း လုပ် နေ လဲ :)
ဘယ် ဆီ ကို မင်း ရောက် နေ လဲ . . .
ဘာ တွေ ကို မင်း လုပ် နေ လဲ . . .
သ တိ ရ နေ တယ် ပန် ပန် . . .
စာ ရေး ပါ အုံး . . .း))
ခေတ်အခြေအနေ ... ။
မာတီပလိုင်းမှာ မတွေ့ လို့ ဒိကိုလိုက်လာတာပါ